Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Finland oo kulan hawleed isugu yimid
Jaaliyadda Finland oo kulan hawleed isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ May 13, 2013
Waxaa maanta gelinkii danbe lagu qabtay Xarunta jaaliyadda ee magaalada Helsinki caasimadda dalka Finland kulan ay isugu yimaadeen dhamaan xubnaha iyo hawlwadeenedda Jaaliyadda Soomaalida Ogadeniya ee Dalka Finland.
kulanka oo ku saabsanaa waxqabadkii 4tii bilood ee sannadkan, oo ay ugu weyn tahay hawliha lagu horumarinayo halgan iyo warbixinada shaqadii socotey ee hawlwadeenadda jaaliyadda.
Waxaa sidii dhaqanka inoo ahayd aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah ku bilaabay kulanka mudane Sh. Maxamed Al-azhari oo guubaabo iyo dardaaran diini ah u jeediyay xubnihii fadhiyaya shirka. Wacdiga kadib, waxaa la dhagaystay warbixin guud oo aad loogu diirsaday oo dhinacyo badana taabanaysay gudo iyo dibadba, kuna aadaneyd halganka iyo howlaha jaaliyadda ay ka waddo waddanka Finland.
Waxaa sidoo kale ay hawlwadeenada madasha ku soo bandhigeen waxqabadkii 4afartii bilood ee u danbaysay sanadkan, masuul walbana waxaa laga dhagaystay waxyaalihii shaqadiisu ku saabsanayd. Waxaa kaalin muhiim ah ka qaatay kulanka Xoghayaha OYSU oo ka warbixiyay waxqabadkii iyo hawlihii ay dhalinyarada ka wadeen dalkan iyagoo bilahan ku mashquulsanaa la kulanka xisbiyada kala duwan ee ka jira dalkan Finland kulamadaas oo u dhacay sidii loogu talagalay.
Kadib dhagaysiyadii hawlwadeenada ayaa waxaa la gudagalay qorshayaasha horyaala jaaliyadda mustaqbalka dhow iyo ka durugsanba ee ay higsanayso guud ahaan jaaliyadda Soomaalida Ogadeniya ee dalkan Finland.
Guntii iyo gabagabadii kulanka oo 3biloodle ah ayaa u qabsoomay sidii loogu talogalay.